ဇီဝနည်းပညာအကြောင်းစလိုက်ရအောင် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > ဇီဝနည်းပညာ > ဇီဝနည်းပညာအကြောင်းစလိုက်ရအောင်
View Full Version : ဇီဝနည်းပညာအကြောင်းစလိုက်ရအောင်
I want to know how to make bio battery.I saw tv news that bio battery can use long time without charging &amp; it value is cheap,also easy to make by used dry cell ,salt &amp; cow waste.but they don&#039;t mention mathod &amp; procedure. Please reply me detail.
Bio Battery ပြုလုပ်နည်းကို ဒီနေရာမှာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,3461.msg27475.html#msg27475)ဆွေးနွေးထားတာတွေရှိပါတယ်။
ဇီဝနည်းပညာ ဆိုလို့ ၀င်လာတာ ဘာမှတော့ ပြောတတ်ဘူး :4: :4:
ဇီဝနည်းပညာ လို့ဖတ်မိမှ ကိုယ်ရထားတဲ့ ဘွဲ့လေး ကိုခုမှ ပြန်မှတ်မိတော့တယ်ဗျာ :4: ငါရထားတာ ဇီဝနည်းပညာ ဘွဲ့ပါလားလို့ :haha:
အသားလွတ်ကြီး ၀င်ကြွားတာ...အဲ.... ကြွားတယ်သာ ပြောတာ ကြွားတောင်မကြွားရဲဘူး ဇီဝနည်းပညာ ဘွဲ့ရလို့ သာပြောတာ ကိုယ်မှ ဘာမှမတတ်ပဲကိုး
လေ့လာရအောင်က လဲ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒါလေ့လာရင် လောလောဆယ် ငတ်မှာ သေချာတယ်.....
ကျောင်းတုန်းက ဘီယာချက်နည်းလေးတော့ မှတ်မိသား စာမေးပွဲပါလို့ အသေကျက်ဖြေထားတာ :2:
မန်းတလေး ဘီယာ ချက်စက်ရုံမှာ အမှန်အကန်သွားလေ့လာပြီး အမှန်အကန် စစ်မစစ် မြည်းခဲ့တာ :4:
လေ့လာရင်တော့ အရမ်းအဖိုးတန်တဲ့ ဘာသာရပ်ပါဗျာ တကယ်ပြောတာ ပါ
ကျွန်တော်က တော့ ဇီဝနည်းပညာ ဆိုတာ အမြည်းသဘော ထိတွေ့ခဲ့ရတော့ ကျန်လေ့လာလိုသူများကို လေ့လာစေလိုပါတယ် DNA ဆိုတာ ခုချိန်ထိ ဘာမှန်းတောင်မသိတဲ့ လူတွေ အများကြီးပါ
ကိုယ်ကိုတိုင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောင်လုပ်မယ့်သူများကို လေ့လာစေလိုပါတယ် အားပေးပါတယ် အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုပါ ခက်တာက ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ သင်ဖို့ ဆရာအလုံအလောက် မရှိတာ ပါ
zoology/chemistry/botany တီချယ်တွေ စုပြီးဝင်သင်ပေးနေရတာ တစ်ခုပါပဲ ......
နောင်လေ့လာလိုသူများ လေ့လာသင့်တဲ့ ဘာသာရပ်ပါလို့ ၀င်ရောက် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ.....
ဇီဝနည်းပညာဆိုတော့ biotechnology ပေါ့နော်...
ဘာမှတော့မသိပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ၀င်ကြည့်တော့ပြန်စာက (၃) စောင်ဘဲရှိသေးတယ်။
ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးကြပါဦး။ ကိုwinaingso လည်းဒီဘာသာနဲ့ဘွဲ့ရပြီးသူဆိုတော့ BT အကြောင်းလေးတွေ သိသမျှဝေမျှပေးပါဦးနော်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စောင့်မျှော် နေပါ့မယ်။
Biotechnology includes any process in which humans use organismic systems or processes to arrive atadesired products,
ranging from bread making to gene therapy.
Introduction to Biotechnology (http://www.pacontrol.com/introduction-to-biotechnology.html)
Biotechnology is technology based on biology, especially when used in agriculture, food science, and medicine. The UN Convention on Biological Diversity has come up with one of many definitions of biotechnology: &quot;Biotechnology means any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use.&quot;
Biotechnology in one form or another has flourished since prehistoric times. When the first human beings realized that they could plant their own crops and breed their own animals, they learned to use biotechnology. The discovery that fruit juices fermented into wine, or that milk could be converted into cheese or yogurt, or that beer could be made by fermenting solutions of malt and hops began the study of biotechnology. When the first bakers found that they could makeasoft, spongy bread rather thanafirm, thin ခရက်er, they were acting as fledgling biotechnologists. The first animal breeders, realizing that different physical traits could be either magnified or lost by mating appropriate pairs of animals, engaged in the manipulations of biotechnology.
In its purest form, the term &quot;biotechnology&quot; refers to the use of living organisms or their products to modify human health and the human environment. Prehistoric biotechnologists did this as they used yeast cells to raise bread dough and to ferment alcoholic beverages, and bacterial cells to make cheeses and yogurts and as they bred their strong, productive animals to make even stronger and more productive offspring.
* Biotechnology helps to meet our basic needs.
* Food, clothing, shelter, health and safety
* Improvements by using science
* Science helps in production plants, animals and other organisms
* Also used in maintainingagood environment that promotes our well being
* Using scientific processes to get new organisms or new products from organisms.
* Includes many approaches and methods in science and technology
* Any technique that uses living organisms or substances from those organisms to make or modifyaproduct, to improve plants or animals Or to develop microorganisms for specific uses.
* All of the applied science based operations in producing food, fiber, shelter, and related products
* New horticultural and ornamental plants
* Wildlife, aquaculture, natural resources and environmental management
* Involves many disciplines or branches of learning
* Includes all areas of Life Sciences
* Working with complete, intact organisms or their cells
* Organisms are not genetically changed with artificial mean
* Help the organism live better or be more productive
* Goal – improve organisms and the conditions in which they grow
* Study and use natural genetic variations
* Cloning is an example of organismic biotech
* Process of producinganew organism from cells or tissues of existing organism.
* 1997 cloned sheep – “Dolly” in Edinburgh Scotland
* Changing the genetic make-up of an organism
* Altering the structure and parts of cells
* Uses genetic engineering, molecular mapping and similar processes
* Changing the genetic information inacell
* Specific trait of one organism may be isolated,cut, and moved into the cell of another organism
* Results of Gen. Eng. Are said to be “transgenic”
* Genetic material in an organism has been altered
* Some new developments delve into the hereditary material of humans known as gene therapy
* Therapeutant - product used to maintain health or prevent disease
* Biopharmaceuticals – drug or vaccine developed through biotechnology
* Called designer drugs
* Biopharming – production of pharmaceuticals in cultured organisms
* Combination of the agriculture and pharmaceutical industries
* Certain blood – derived products needed in human medicine can be produced in the milk of goats
* Any biotechnological process that may promoteagood environment
* Organisms developed during the gulf war to “eat” oil
* Organism used in gold mining to “eat” contaminants
* Problems naturally solved by microorganisms such as bacteria, fungi break down contaminant intoaform less harmful or not harmful
* Plant biotech
* Animal biotech
* Improve plants and the products produced from them
* Insect and disease resistance
* Engineered to have desired characteristics
* Corn plant produced with high levels of the amino acid Lysine
* Improve animals or the products they produce
* Animals may be used to produce products that promote human health
* Pigs engineered to produce human hemoglobin
* Use of technology in producing and processing
* Some biotech principles have been employed for hundreds of years
* Yeast in baking bread
* Genetically altered crops
* rBGH milk
* Helps meet human needs
* Food, clothing and shelter
* Plants and animals are used in manufacturing food, clothing and materials for shelter
* Used to make products more useful or desirable
* Ex: conversion of milk into cheese or yogurt
* Must keep the cost of improving products as low as possible
* Biotech results in greater efficiency
* Inoculating legume seeds with bacteria that allow the plant to pull nitrogen out of the air and put it into the soil
* Saves the producer the cost of applying N fertilizer
* Results in trees that grow faster and produce wood that is more desirable
* Increases yields
* bST use in cows to produce more milk
* Higher crop yields from drought, disease &amp; insect resistant crops
* Food with unique traits
* Some contain therapeutants
* Some designed with nutrient enrichment
* Consumers want foods to provide needed nutrients and in some cases, enhanced foods
* Do not want side effects from those enhanced foods
* Flavr-Savr Tomato
* Reached the market in early 1990’s
* Engineered to havealonger shelf life
* No soft spots
* No rotten spots
* Tomato resists spoilage
* Creating lifelike characteristics through the use of chemicals
* Based on creating structures similar to those found in living organisms
* Need for synthetic cells lead to the development of the vesicle
* Vesicle – tiny rounded structure with cell like traits
* Tiny structures similar to soap bubbles were created to serve as the cell membrane
* Visible only with powerful microscope
* Once the cell membrane has been successfully developed, development of the materials with the cell is initiated.
* Is important because it brings science closer to creating life in the lab
* Cells and tissues may be developed to treat human injury and disease
PPT လေးနဲ့ ယူချင်ရင်
Biotechnology မှာ branch တွေ အများကြီး ခင်ဗျ
အဲထဲမှာ မှ တချို့ တွေ ကို ဥပမာ အနေနဲ့ ထုတ်နှုတ်တင်ပြ ပေး ပါမယ်ခင်ဗျာ.....
* Bioinformatics is an interdisciplinary field which addresses biological problems using computational techniques, and makes the rapid organization and analysis of biological data possible. The field may also be referred to as computational biology, and can be defined as, &quot;conceptualizing biology in terms of molecules and then applying informatics techniques to understand and organize the information associated with these molecules, onalarge scale.&quot; Bioinformatics playsakey role in various areas, such as functional genomics, structural genomics, and proteomics, and formsakey component in the biotechnology and pharmaceutical sector.
* White biotechnology, also known as industrial biotechnology, is biotechnology applied to industrial processes. An example is the designing of an organism to produceauseful chemical. Another example is the using of enzymes as industrial catalysts to either produce valuable chemicals or destroy hazardous/polluting chemicals. White biotechnology tends to consume less in resources than traditional processes used to produce industrial goods. The investment and economic output of all of these types of applied biotechnologies is termed as bioeconomy.
Blue Biotechnology က the marine and aquatic applications of biotechnology ကိုဆိုလိုချင်တာ
ွGreen Biotechnology ကတော့ biotechnology applied to agricultural processes ပါ
Red Biotechnology က medical processes အတွက်သုံးတာပါ
White Biotechnology ကိုတော့ industrial biotechnology လို့ လည်း ခေါ်ပါတယ်
အဲလို ခေါင်းစဉ်ခွဲတွေ အများကြီး ရှိတဲ့  ထဲမှာမှ
ကျနော် က တော့ Red Biotechnology လို့ ညွှန်း ဆိုတဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်မှ ဇီဝနည်း ပညာ အသုံးချမှုအကြောင်း ကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ sharing လုပ် သွားပါမယ်...ခင်ဗျာ
ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး ဗဟုသုတတွေ တိုး ပွား များ ပြား နိုင်ပါစေ .....
Red Technology အကြောင်း မပြောခင်မှာ Biotech နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတလေး တွေ ဝေမျှပါမယ်
ခေတ်သစ်မှာ Biotech ကို ဒီလို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလာပါတယ်
“New” Biotechnology—the use of cellular and biomolecular processes to solve problems or make useful products.
အရမ်း ကို ရိုး ရှင်း ပြီး အရမ်း လည်း ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ပါ ...သက်ရှိအပင်နဲ့ သတ္တ၀ါတွေ ရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး ဖြစ်တဲ့ ဆဲလ်တွေ ဇီဝမော်လီကျူး တွေ ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ ဖြစ်စဉ်တွေ ကို အသုံးချပြီး ပြဿနာတွေ ကို အဖြေထုတ်မယ် နောက်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်မယ်လို့ ဖွင့်ဆိုထား တာပါ....
ဇီဝနည်း ပညာ အသုံး ချမှု ဟာ ရှည်လျား လှတဲ့ သမိုင်း ကြောင်း ရှိခဲ့ ပါတယ် ။
Time Line ဆွဲ ရ ရင် ဘီစီ ၈၀၀၀လောက်က စတယ်လို့ ဆိုကြတယ် ...
Humans domesticate crops and livestock.
Potatoes first cultivated for food.
အဲ အချိန် ကနေစလာလိုက်တာ ၂၀ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာ ဇီဝနည်း ပညာ ပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲတိုး တက်မှုတွေ က လူ့ဘောင်လေက ကို အထောက်အကူပြုလာပါတော့တယ်....
Biotechnology Industry ကိုစဖွဲ့ စည်း တည်ထောင်ပြီး တဲ့ ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်း က စ လို့ မျက်မှောက် ကာလမှာ ဇီဝနည်း ပညာအသုံး ပြုပြီးရရှိလာတဲ့ တီထွင်မှု တွေ အောင်မြင်မှုတွေ ကို ကို ဥပမာ အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးပါမယ် ခင်ဗျာ
Biotechnology has created more than 200 new therapies and vaccines, including products to treat cancer, diabetes, HIV/AIDS and autoimmune disorders.
ကင်ဆာ ရောဂါ ၊ ဆီးချို ရော ဂါ၊ အေစ့် ရောဂါ စတဲ့ ရောဂါဆိုးကြီး တွေ ကို ကုသမှု မှာ အထောက်ကူပြုမယ့် ကုထုံး သစ်များ၊ ကာကွယ်ဆေး များ အရေအတွက် အား ဖြင့် ၂၀၀ကျော် ကို ဇီဝနည်း ပညာ ဖြင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ ပြီး ဖြစ်ပါတယ်
There are more than 400 biotech drug products and vaccines currently in clinical trials targeting more than 200 diseases, including various cancers, Alzheimer’s disease, heart disease, diabetes, multiple sclerosis, AIDS and arthritis.
ကင်ဆာ ၊ အမ်ဇိုင်း မား ရောဂါ ၊ နှလုံး ရော ဂါ၊ ဆီးချို ၊ အေစ့် ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင် စတဲ့ ရောဂါအမျိုး အစား ပေါင်း ၂၀၀ကျော် အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဇီဝနည်း ပညာသုံး ဆေး နဲ့ ကာကွယ်ဆေး အရေအတွက်ကလည်း ၄၀၀ကျော်ရှိနေပါပြီ
ဆေး ၀ါး ထုတ်လုပ်မှု မှာ တွင်သာ မက ရောဂါ ရှာဖွေ ရေး အတွက် ပါ ဇီဝနည်းပညာ ကို အသုံး ပြုခဲ့ ကြပါတယ် ....။eg.ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိစမ်းသပ်တဲ့ test kit
Consumers are enjoying biotechnology foods such as papaya, soybeans and corn. Biopesticides and other agricultural products also are being used to improve our food supply and to reduce our dependence on conventional chemical pesticides.
စား သုံး သူတွေ ကလည်း ဇိဝနည်း ပညာသုံး စိုက်ပျိုး သီးနှံများ ကို နှစ်သက်ခဲ့ ကြပါတယ် ...
ဇီဝပိုး သတ်ဆေး များနဲ့ ဇီဝနည်း ပညာသုံး စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များ ကြောင့် အထွက်နှုန်းတွေ တိုး သလို ဓာတု ပိုး သတ်ဆေး သုံး စွဲမှုကိုလည်း လျှော့ ချနိုင်ခဲ့ ပါတယ်
Environmental biotechnology products make it possible to clean up hazardous waste more efficiently byharnessing pollution-eating microbes without the use of caustic chemicals. processes that produce less waste and use less energy and water in such industrial sectors as chemicals, pulp and paper, textiles, food, energy, and metals and minerals. For example, most laundry detergents produced in
the United States contain biotechnology-based enzymes.
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ဖို့ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ ဇီဝနည်း ပညာသုံး ထုတ်ကုန်များ က ဘေး ဖြစ်စေမည့် စွန့်ထုတ်ပစ္စည်း များ ကိုဖယ်ရှားရှင်း လင်း ဖို့နဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်း များ တွင် စွမ်း အင်သုံး စွဲမှု၊ရေသုံးစွဲမှု လျှော့ချနိုင်ဖို့ အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်
ဇီဝနည်းပညာကိုသုံး ခြင်း ဖြင့် မှုခင်း များ စုံစမ်း စစ်ဆေး ရာမှာ၊နောက်ပြီး မှုခင်း ဆေး ပညာမှာပိုပြီး ထိရောက်တိုး တက်လာပါတယ်....eg. ဒီအင်န်အေ ၊လက်ဗွေ ရာစတာတွေ အသုံး ပြုမှု ပါ
Biotechnology is one of the most research-intensive industries in the world.
Biotech က သုတေသနပြုလုပ်ချက်ပေါ်မှာ အများကြီး အခြေခံ ပါတယ် ....အရင်း အနှီး လည်းကြီး သလို နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာလည်း အချိန်ပေး ရပါတယ် ...
ဆေးတစ်ခုပေါ်ထွက်ဖို့ အတွက် ဆို ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ထိ သုတေသနပြု စမ်း သပ်စစ်ဆေး ရပါတယ်
In 1982, recombinant human insulin became the first biotech therapy to earn FDA approval.
ဒါကတော့ ဆေး ပညာလောကနဲ့ ဇိဝနည်း ပညာလောကရဲ့ ပထမဆုံး အောင်မြင်မှု မှတ်တိုင်လို့ ဆိုရပါမယ်
ဆီးချို ရောဂါ ကုသရာမှာလိုအပ်တဲ့ အင်ဆူလင်ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်း ကိုအရင်က ၀က်တွေ နွားတွေ ကနေထုတ်ယူရရှိပါတယ် .....(မျိုး မတူတဲ့ အတွက် ဓာတ်မတည့်တာတွေ ဘာတွေရှိပါတယ်)
၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာတော့ လူ့ ခန္ဓာကိုယ်က ထွက်ရှိတဲ့ အင်ဆူလင်အမျိုး အစား အတိုင်း ကို ဇီဝနည်း ပညာသုံး ပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ
Bioethanol—made from crop wastes using biotech enzymes—could meetaquarter of U.S. energy needs
ဒါကတော့ ဘိုင်အိုအီသနော ပါ ....စွမ်းအင်အခြေပြုခေတ်မှာ လောင်စာအတွက် စိုး ရိမ်နေရတာတွေ စစ်ပွဲတွေ ခင်းနေရတာကို ဖြေရှင်း ပေး နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြပါတယ် (၂၀၂၅ ယူအက်စ်ရဲ့ စါမ်း အင်လိုအပ်ချက် ရဲ့ လေး ပုံတစ်ပုံ ကို ဒီ ဘိုင်အိုအီသနော က ဖြည့်ဆည်း ပေး မယ်လို့ ခန့်မှန်း ထား ပါတယ်)
The Biotechnology Industry Organization (BIO) was founded in 1993 to represent biotechnology companies at the local, state, federal and international levels. As of December 2006, BIO’s membership consisted of more than 1,100 biotechnology companies, academic centers, state and local associations and related enterprises.
ဘီအိုင်အို ကို ၁၉၉၃ မှာ ဖွဲ့ စည်း တယ် ..ကုမ္ပဏီ အစုအဖွဲ့ ပေါင်း ၁၁၀၀ကျော်ပါဝင်တယ်
ဇီဝနည်းပညာက သုတေသန ကို အခြေခံတာမို့ အရင်း အနှီးကြီးလွန်းတဲ့ အတွက်နောက်ပိုင်းမှာ ပါတနာအနေနဲ့ စပ်တူ ပူး ပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်လာနိုင်ဖို့ အတွက်ရည်ရွယ်တာပါ...
ဒါကတော့ ဇီဝနည်း ပညာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နောက်ခံ ရာဇ၀င် ကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဝေမျှတာ ပါ ........
အခု အစပျိုး ချင်တဲ့ အကြောင်း ကတော့ Red Technology အကြောင်း ပါ..........
ဟူး ...လိုရင်း ကို ခုမှရောက်တော့တယ် :e
Red biotechnology refers to the use of organisms for the improvement of medical processes. It includes the designing of organisms to manufacture pharmaceutical products like antibiotics and vaccines, the engineering of genetic cures through genomic manipulation, and its use in forensics through DNA profiling.
သက်ရှိတွေ မျိုး ဗီဇတွေ ကို အသုံး ချပြီး ဆေး ပညာအတွက်လိုအပ်တဲ့ ပဋိဇီဝဆေး ၀ါးတွေ ၊ကာကွယ်ဆေး တွေထုတ်လုပ်ဖို့ ပါ
ဒိနေရာမှာ သက်ရှိဆိုတာ ဘက်တီးရီးယား ၊ဗိုင်းရပ်စ် စတာတွေ၊ အပင်တွေ ကို အဓိကဆိုလိုတာပါ...
Thanks for discussion for biotech. I think whether right or not, there aren&#039;t any technical discussion. whatever pls let&#039;s try.
စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးမေးချင်ပါတယ်။ဂျပန် နည်းပညာ EM ဇီဝဖျော်ရည် ပြုလုပ်ပုံနဲ့ အသုံးပြုပုံ ၊ ကောင်းကျိုလေးတွေ နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါဦး။ဘယ်မှာရှာရမလဲမသိလို့ပါ။ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိထားပေမယ့် ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတာမသိလို့ပါ။ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ထုတ်လုပ်ပုံလေးလည်း သိရင် မျှပေးကြပါဦး။ :? :? &lt;3
အားလုံးပဲ မောနင်း ပါ ...
ဖို၇မ်ထဲတောင်မရောက်တာကြာပေါ့....ခုတော့ စာနဲ့ ပေနဲ့ ဝေးနေပါပြီ....စာဖတ်ဖို့တောင်မနည်းရယ်..
မြို့ ရောက်တုန်း ဖိုရမ်ထဲ ၀င်လာတာပါ..
အီးအမ် တင် မကဘူး ဗျာ
စိုက်ပျိုးရေး သမားတွေ အတွက် အသုံးတည့်တာလေးတွေ ရှိရင် မျှပေးကြပါအုံး.....
ဘီယာ ချက်နည်းလေး အသေးစိတ်သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ဘီယာ ချက်နည်းလေး အသေးစိတ်သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ .............;D
ဟိုးအရင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များကထုတ်ဝေခဲ့ဖူးတဲ့ ခတ္တိယ ဆိုတဲ့ နည်းပညာဂျာနယ်မှာ ဓါတုအင်ဂျင်နီယာတဦးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာ မျိုးသန့်တင်ရဲ့ ဘီယာချက်လုပ်မှုဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကို san tint အနေနဲ့ http://en.wikipedia.org/wiki/Beer မှာ အခြေခံချက်နည်းတွေကို လေ့လာနိုင်သလို၊ အသေးစိတ်ကိုတော့ သိရှိနည်းလည်သူများမှ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဖိုရမ်မှာ ပျော်ရွှင်စွာလည်ပတ်ရင်း မျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျား။
ပိုးမွှားဆေးရည်လောင်းထည့်ပြီး သစ်ရွက်ဆွေးမြေသြဇာလုပ်တဲ့နည်းရယ် ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
အေ၇ာက ဒိန်ချဉ်လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ ပျားမွေးမြူရေးကိုတော့ နည်းနည်းသိတယ်။
၀ိုင်တွေ ဗြစ်ရည် တွေအတွက် အလင်ခံတာ ကဇော်ဖေါက်တာ သေချာသိဘူး။ အဲဒါလည်း သိချင်တာပဲ။
ကျွန်တော်ကို aqua အကြောင်းလေးရေးပေးပါဦး...
Aye Kyaw Htoo
Microbes (bacteria) တွေသုံးပြီး Waste water တွေကို Clean water, portable water လုပ်တဲ့ Process တွေကို သိချင်ပါတယ်။ Water recycling machine အသေးစားတွေကို mechanical ပိုင်း လုပ်ပေးဘူးပါတယ်။ Biotechnologist consultant လိုအပ်သလောက် ဆောင်ရွက်ပေးရူံလောက်ပါ။ ကိုယ်မသိတဲ့အပိုင်းကို ကိုယ်သိတဲ့အပိုင်းနဲ့ ပေါင်းကြည့်ချင် လို့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် ဒီ field က သိပ်ပြီးတော့မကျယ်ပြန့်သေးပါဘူး
အဲဒီတော့ သိတဲ့ အကို အမ များက ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြပါလို့....